पोखरा महानगरपालिका अपारदर्शिता छताछुल्ल : करिब १३ करोड रुपैँयाको आर्थिक लेनदेन उधारोमा « News24 : Premium News Channel
पोखरा महानगरपालिका अपारदर्शिता छताछुल्ल : करिब १३ करोड रुपैँयाको आर्थिक लेनदेन उधारोमा
पोखरा, २६ साउन । पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक अपारदर्शिता दिनानुदिन छताछुल्ल भैरहेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिबेदनले महानगरपालिकाको अपारदर्शितालाई पुष्टि पनि गरिदिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको हिसाबको बिषयमा उठेको प्रश्नको बिषयमा मलेपले बुझाएको प्रतिबेदनमा महानगरपालिकाले बुझाएको हिसाब अनुसार उठाउन बाँकी रहेको करिब १३ करोड रुपैँयाको हिसाबले महानगरपालिकामा पनि आर्थिक लेनलेन उधारोमा चल्ने गरेको खुलासा भएको छ ।
उधारो कारोवार गरेको महानगरपालिका यतिबेला सोही लिन बाँकी चेकको चंगुलमा फसेको छ । पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को कारोबारलाई मलेपले साट्न बाँकी रकम भन्दै देखाएको करिब १३ करोडको हिसाब अनुसार १३ करोड रुपैया खै ? भन्दै सरोकारवाला निकाय तथा स्थानीय स्तरबाटै गुनासो बढे सँगै यो अनियमितता चरम उत्कर्षमा पुगेको हो ।
२०७७ असार २५ गते मलेपको अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको साटिन बाँकी चेकको रकम १२ करोड ४४ लाख ५ हजार ९ सय ३ रुपैया अन्र्तगत महानगरपालिकाबाट असारको अन्तिममा जारी गरिएका खर्चको चेक अनुसार सो रकम एक महिना भित्र साटिने ब्यहोरा सहित प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी महानगरपालिकाको साटिन बाँकी रहेको रकम करीब १२ करोड ४४ लाख रुपैयाँको हिनामिना वा सो रकम कहिले कस्ले उठाउने भन्ने बिषयमा महानगरपालिकाको बिवाद बढेको श्रोतको दाबी रहेको छ ।
सोही बिषयमा श्रावण २६ गते महानगरपालिकाले प्रेश बिज्ञप्ती जारी गरेर १३ करोड नभई १ करोड ७३ लाख ११ हजार नौ सय ८९ रुपैयाको मात्र हिसाब फरक परेको दाबी गरेको छ । साथै १३ करोड खै भन्ने प्रश्न प्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
तत्कालिन राजश्व शाखाका छबिलाल शर्माको लापरवाहीका कारण समस्या बढ्दै गएको महानगरपालिकाका चर्चा चुलिएको छ । राजश्व शाखामा यसरी उधारो चेक कारोवार गर्ने गरेको पटक पटक पाइएको छ । करीब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको उधारो कारोवार हँुदा पनि वास्ता नगर्नुले राजश्व शाखाका तत्कालिन प्रमुख छबिलाल शर्माको नियतमा प्रश्न उठेको छ ।
छबिलाल शर्माले महानगरपालिकाको राजश्व शाखामा काम गर्दा यस्ता धेरै उधारो चेक लिएर ब्यवहार मिलाइदिएको तथा उधारो चेकमा पनि टेन्डरको प्रकृया अगाडी बढाउने गरेको श्रोत बताउँछ ।
महानगरपालिकासँगको आर्थिक कारोवारमा नगद तथा बैकबाट कारोवार गर्नुपर्ने प्रावधान भएता पनि शर्माले किन पछिल्लो मितिको चेकलाई बैधता दिए भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ । शर्मा हाल कार्यालयमा त्यत्ति उपस्थीत हँुदैनन । बिवाद बढे सँगै हाल महानगरपालिकाले राजश्व शाखामा अर्का कर्मचारीलाई खटाइएको छ ।
यसै बिषयमा बुझ्दा महानगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परिक्षक रोमनाथ उपाध्यायका अनुसार आफुले माघबाट मात्र सो कार्यभार सम्हालेको र आलेपले महानगरपालिकालाई हिसाब मिलान गर्न बारम्बार ताकेता गरेको भएता हिसाब मिलान हुन नसकेको बताए । त्यस्तै मेयर मानबहादुर जिसीले सो बिषयमा आवश्यक जाँचबुझ भैरहेको बताउनुभएको छ । दोषि जो सुकै भए पनि कारवाही गरिने पनि जिसीले बताएका छन् ।
यसरी पोखरा महानगरपालिकाले चेकमा कारोवार गरेर उठ्न बाँकी रहेको बेरुजु करोडौ रुपैया कसरी मिलान गर्ने हो ? हेर्न बाँकी नै छ । यो घटनाले महानगरपालिका भित्र हुने आर्थिक अपारदर्शिताको चरम लापरवाही कति हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।